ओलीजीले शेरबहादुरजीलाई अझै तीन पटक... :: मीनेन्द्र रिजाल :: Setopati
मीनेन्द्र रिजाल असार २१
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुवास नेम्वाङले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको सन्दर्भमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा खबर आएका छन्। सुवासजीसँगका भेटबारे केही सञ्चारमाध्यममा आधारविहिन कुराहरू आएकाले सार्वजनिक रूपमा मैले भन्नु आवश्यक ठानेको छु।
आज पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पनि यसबारे मैले केही बिफ्रिङ गरेँ। संसदमा केही अप्ठ्यारो हुँदा नेकपाबाट सुवासजी र हाम्रो पार्टीबाट मैले समस्याहरू हल गर्ने प्रबन्ध कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदादेखि नै गरिआएका थियौं। सुवासजीको संयोजकत्वमा भएको एक समितिमा म पनि छु।
त्यो समितिले प्रतिवेदन दिनुपर्ने समय सकिन लागेकाले केही विषय टुंग्याउनुपर्ने छ। त्यही सिलसिलामा मलाई हिजो (शनिबार) सुवासजीले फोन गर्नुभयो।
साथै प्रधानमन्त्रीले सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्न भन्नुभएकाले भोलि (आइतबार) सम्म समय मिलाउनुपर्‍यो भनेर उहाँले भन्नुभयो।
'ठीक छ, म सभापतिजीसँग कुरा गरेर भेटौंला' भनेको थिएँ। सभापतिजीसँग कुरा गरेँ। बिहान १० बजे भेट्ने कुरा भयो। सुवासजीलाई खबर गरेँ।
आज बिहान १० बजे सुवासजी आउनुभयो। म पनि सभापतिजीसँगै थिएँ। सभापतिजी, म र सुवासजी, तीन जनाबीच कुराकानी सुरू भयो।
पहिले हाम्रो सभापतिजीले कुरा राख्नुभयो। उहाँले असार १७ गते प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटका कुरा निकाल्नुभयो। त्यस दिन संवैधानिक नियुक्तिलगायत कुरा अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको रहेछ।
सभापतिजीले भन्नुभयो— संसदमा एजेन्डा धेरै छन्। विधेयकहरू छन्। ती निप्ट्याउनु पर्नेछ। तर तपाईंहरूले त थाहै नदिई असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभयो।
यसबारे सुवासजीले सभापतिजीलाई खासै जवाफ दिनुभएन। हाँसेर बस्नुभयो।
यसपछि सुवासजीले आफ्ना कुरा राख्नुभयो। उहाँले संवैधानिक नियुक्तिबारे कुरा गर्नुभयो। सभापतिजीको प्रधानमन्त्रीसँग त्योबारे कुरा भएको रहेछ। संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल गर्न कहिले बैठक राख्ने भनेर सोध्नुभयो।
यसपछि सभापतिजीले कांग्रेसको पहिलेदेखिकै कुरा राख्नुभयो- 'अस्ति नै तपाईंहरूले अध्यादेश ल्याएर मेरो भूमिका (प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको) सक्न खोज्नुभएको थियो। अध्यादेश फिर्ता भएपछि स्वभाविक रूपमा मसँग सल्लाह गर्नुपर्ने भयो नि!'
सभापतिजीले सुवासजीसँग अहिले पनि संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने काम नगरेर अलमलमा रहनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता छैन भन्ने कुरा प्रष्ट राख्नुभएको हो। उहाँले यी विषय टुंग्याउन म जहिले पनि तयार छु भन्नुभयो।
कुरा चल्दैजाँदा हामीबीचमा मजाक पनि चल्यो। जुन कुरा मैले आज केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि सुनाएको थिएँ।
कुरा चुनावका बेलाको हो।
त्यसबेला केपी शर्मा ओलीले एक ठाउँमा भाषण गर्दै शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हो भन्नुभएको थियो। उहाँको आसय अब नेपालमा नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै चुनाव जित्दैन भन्ने थियो।
त्यही प्रसंगमा मैले आज ढिलै भए पनि सुवासजी मार्फत जवाफ फर्काएँ- शेरबहादुरजीलाई सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर ज्योतिषले भनेका छन् रे। त्यो हिसाबले ओलीजीले शेरबहादुरजीलाई अझै तीन पटक प्रधानमन्त्री बेहोर्न बाँकी नै छ! त्यसपछि अरूलाई बेहोर्ने हो। यो कुरा हाँसो मजाकमा चलेको हो।
त्यसपछि हाम्रो छलफल अहिलेको राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रह्यो।
सुवासजीलाई हामीले भन्यौं— तपाईंको पार्टी नेकपामा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै मत छैन।
हामी आफू त प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँमा पनि छैनौं भन्ने कुरा राख्यौं।
यसपछि देशमा महामारीका रूपमा रहेको कोरोना भाइरसका बिरामी दिनप्रतिदिन थपिएको कुरा निस्कियो। यस्तो कठिनाइका बेला कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक झगडा गरिरहेकाले राम्रो गरेको छैन भन्ने कुरा सुवासजीलाई भन्यौं। महामारीका बेला सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा व्यापक असन्तोष छ। त्यसमाथि नेकपाको आन्तरिक झगडाले लोकतन्त्र र राजनीतिक पार्टीहरूबारे नै बाहिर वितृष्णा उत्पन्न भएकाबारे पनि कुराकानी गरेका थियौं।
सभापतिजीले आफू नेकपाको आन्तरिक झगडामा कुनै पक्ष वा विपक्षमा नरहेको र कुनै पक्षको पनि हुन नचाहेको कुरा राख्नुभयो। साथै उहाँले प्रष्ट रूपमा सुवासजीलाई 'तपाईंहरू यो अलमल धेरै नलम्ब्याउनुहोस्' भन्नुभयो।
यो विषयमा मैले पनि थौरै कुरा राखेँ। प्रधानमन्त्रीको कस्तो अवस्थामा मात्रै पद जान्छ भन्ने कानुनी पाटाबारे कुरा राखेको हुँ। नेकपा संसदीय दलले उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) सँग बहुमत छैन भनेर पारित गरेर अर्को नेताको बहुमत छ भन्यो भने स्वतः राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर अरू कांग्रेसले वा जनता समाजवादीले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्यो भने त्यही अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने पार्टीको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेँ।
यो प्रसंग किन उप्काएको हुँ भने कसैले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्छ भने वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो, त्यसको नाम पनि लिएर जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई राख्ने वा हटाउने कांग्रेस पार्टीले भन्ने कुरा होइन। स्वभाविक रूपमा बाहिर जति सनसनीपूर्ण कुरा गरे पनि कम्युनिस्ट पार्टीको झगडामा कांग्रेसको कुनै भूमिकै छैन भन्ने कुरा मैले राखेको थिएँ।
यदि नेकपा एउटा पार्टी नरहेर दुइटा पार्टी भयो भने त्यसबेला मात्रै कांग्रेसको भूमिकाबारे कुरा आउला। अहिले त उहाँहरू एउटै पार्टी हुनुहुन्छ। झगडा आन्तरिक हो।
नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडामा कांग्रेसले कुन पक्षलाई मद्दत गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने कुनै प्रश्न नै होइन। यो त कम्युनिस्ट पार्टीको नितान्त आन्तरिक विषय हो। यसमा कांग्रेसलाई जोड्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन।
(प्रधानमन्त्रीका 'दूत' बनेर देउवासँग भेटेका सुवास नेम्वाङसँग भएको वार्ताबारे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालसँग सेतोपाटीका प्रशन्न पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः)
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार २१, २०७७, २२:२०:००